‘बटरफ्लाई’ असफल हुँदा आर्यनलाई कति घाटा ? | Jukson
‘बटरफ्लाई’ असफल हुँदा आर्यनलाई कति घाटा ?
‘के म तिम्रो होइन र’ का डेब्यु नायक आर्यन अधिकारीलाई उनको पछिल्लो फिल्म ‘बटरफ्लाई’ बाट ठूलो धक्का लागेको छ । यो फिल्मले दर्शकहरुलाई लोभ्याउन सकेन । पुष २८ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको यो फिल्म बक्स अफिसमा कमजोर साबित भएको छ । रिलिजको पहिलो हप्ता नाघ्दै गर्दा निर्माताबाट करोड ग्रसको जानकारी आएपनि यसलाई धेरैले गलत रिपोर्ट बताउँछन् । सँगै आएको फिल्म ‘मिस्टर झोले’ को चेपुवामा परेका कारण पनि ‘बटरफ्लाई’ स्वतन्त्र रुपमा उड्न पाएन । यो फिल्मबाट सबैभन्दा ठूलो घाटा नायक अधिकारीलाई भएको छ । किनकी, उनको डेब्यु फिल्म पनि सफल भएको थिएन । यसकारण उनका लागि ‘बटरफ्लाई’ चल्नै पर्ने दबाब थियो । तर, दुर्भाग्य फेरि उनी रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् ।
फिल्ममा उनले बोलेका डाइलगहरु वजनदार भएपनि अभिनयमा दर्शकले फरक भेराइटी पाउन सकेनन् । फिल्म असफल हुनुको कारण कमजोर कथावस्तु र प्रस्तुतिलाई मानिएको छ । अहिले उनी पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठसँग ’बाँध मायाले’ नामक फिल्म गरिरहेका छन् । सविर श्रेष्ठ फिल्मका निर्देशक हुन् । प्रियंका कार्कीसँग रोमान्स गर्दा करिअरको सुरुवात विन्दूमा नै ठूलो धक्का खाएका आर्यनलाई के अब सृष्टिसँगको साथले राहत देला ? ’जस्मिन’, ’करोडपति’ जस्ता फिल्ममा समेत अभिनय गरिसकेका आर्यनले अब आफ्नो कलिलो करिअर बचाउन एउटा हिट फिल्म दिन अत्यन्त आवश्यक छ । फिल्म हिट हुँदा मात्र एउटा कलाकारको डिमान्ड बढ्ने गर्छ । लगातार फ्लप फिल्मको मात्र छाँया पर्दा करिअरको अन्तिम विन्दू सामुन्ने आइपुगेको समेत पत्तो हुँदैन । संख्यात्मक हिसाबले ५ फिल्म गरिसकेका आर्यनले भोलीका दिनमा गुणस्तरतर्फ ध्यान नदिने हो भने उनको गुमनाम यात्रा चाँडै सुरु नहोला भन्न सकिन्न ।
हस्पिटालिटी नेपाल अडिसन बुटवलमा
भारतमा इन्धनको मूल्यवृद्धि